Golaha Shacabka oo maalintii 3-aad maanta baajinaya kulankiisii 33-aad – Kalfadhi
Golaha Shacabka oo maalintii 3-aad maanta baajinaya kulankiisii 33-aad
Golaha Shacabka ayaa, kadib markii uu Guddoonkiisa xaliyey khilaafkii u dhaxeeyey, waxaa maalinkii 3-aad baaqanaya kulamo ay ahayd inuu qaranka ugu qabto shaqooyin ay ka mid yihiin ka shaqeynta iyo meel-marinta Hindise Sharciyeedyo hor yaala Golaha, kuwaas oo ay ahayd inuu ansixiyo ka hor inta uusan galin fasaxiisa, marka uu u dhamaado Kalfadhiisa 4-aad.
Golaha Shacabka ayaa kulan uu yeesho waxaa ugu dambeysay 30-kii Diseembar ee sanadkii tagay, taas oo ka dhigan in Isniintii iyo Arbacadii la soo dhaafay kulamo ay ahayd inuu yeesho aysan qabsoomin. Golaha iyo Guddoonkiisaba horay uma sii sheegin sababta baaqashada kulamadaas iyo micnaha ay leeyihiin. Balse, Axaddii la soo dhaafay waxa uu Goluhu kulankiisii maalinkaas oo kaliya ku meel mariyey 3 Hindise Sharciyeed.
Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa sheegay iney Baarlamaanka Soomaaliya horyaalaan 29 Hindise Sharciyeed, oo uu sheegay inuu ka filayo iney muddo kooban ku meel-mariyaan. “Waxaan hubaa in labaatan iyo sagaalkaas (Hindise Sharciyeed) ay ku dhameyn doonaan muddo aad iyo aad u kooban” ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo. Laakiin, taas ma muuqato.
Baarlamaankan 10-aad waa uu 2 jirsaday, balse 4-tii Kalfadhi ee uu yeeshay ilaa sanadkii 2017, oo uu u ugu dambeeyo kan hadda gabagabada ah, waxa uu Madaxweynhu sheegay iney u soo gudbiyeen 2 Hindise Shaciyeed oo kaliya. “Sanadkii la soo dhaafay iyo sanadkan laba sharci bis ayaan saxiixay, waxaana sugeynay intaas iyo in ka badan” ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo. “Waxaan ka codsanayaa Golaha Shacabka ee sharafta leh iyo Golaha Aqalka Sare in inta hartay ay si dhaqsiya iigu soo gudbiyaan” ayuu hadalkiisa raaciyey.
Taas waxay muujineysaa inuu Golaha Shacabka uga baxay, si ka soo horjeedda shaqadiisa, waqti aad u fara badan firaaq uu baneeyey. Kalfadhigan iyo kii ka horeeyey waxa uu khilaafyo aad u qaraaraa ku lumiyey waqti uu ugu adeegi lahaa qaranka. Mararka qaar, sida hadda taagan, waxaa baaqda kulamada Golaha, iyada oo aysan muuqan sabab cad oo arrintaas keeni karta.
Golaha Shacabku waxa uu kulmaa todaabkii saddex jeer (Sabti, Isniin iyo Arbaco), waana maalmaha uu Kalfadhi xisaabinayo inuu Goluhu gafay kulamadii caadiga ahaa ee ay ahayd inuu yeesho. Lama oga inuu Goluhu kulmi doono 2-da maalin ee uga hartay inuu isugu yimaado kulamadiisa Kalfadhiga 4-aad, oo ku began Isniinta iyo Arbacada soo socota. Waqtigaas kadib waxaa la filayaa inuu Goluhu galo fasax 2 bil ah.
Aqalka Sare oo laga yaabo inuu maanta fasiraad ka bixiyo hakintiisa xiriirka Golaha Shacabka
Guddiga Doorashada Madaxweynaha iyo Kuxigeenkiisa Puntland oo lagu dhawaaqay